» आयुष्मानको प्रश्न : म चुसेको आँप’ जस्तो छु र ?
आयुष्मानको प्रश्न : म चुसेको आँप’ जस्तो छु र ?
११ असार २०७६, बुधबार ११:४६ प्रकाशित
असार ११ – चलचित्र ‘चपली हाइट २’ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेका आयुष्मान देशराज जोशी बेला बेला चर्चामा आईरहन्छन् । चलचित्रले चर्चा पाउन नसके पनि उनी बाहिरी बिषयले चर्चामा आईरहन्छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्की सँगको प्रेम सम्बन्धले उनलाई निकै चर्चामा तान्यो । प्रियंका सँगको प्रेम सम्बन्ध पछे नै उनले नयाँ नाम पाए ‘चुसेको आँप’ ।
सामाजिक सन्जालमा उनलाई धेरैले ‘चुसेको आँप’ भन्ने गर्दछन् । प्रियंका सँगको सम्बन्ध पछी उनलाई नरुचाउनेहरुले यो नाम दिएका हुन् । आफुहरु धेरैले ‘चुसेको आँप’ भन्ने बारे आयुष्मान जानकार छन् । पहिले पहिले त ‘चुसेको आँप’ भनेको सुन्दा उनालाई रिस उठ्थ्यो । तर बिस्तारै त्यो उनलाई सामान्य लाग्न थाल्यो । हालै आफुलाई ‘चुसेको आँप’ भन्ने बारे आयुष्मनले पहिलो चोटि मुख खोलेका छन् ।
असार २० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘सानो मन’ को विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफु ‘चुसेको आँप’ जस्तो नदेखिने बताएका छन् । आफुलाई धेरैले ‘चुसेको आँप’ भन्ने गरे पनि आफु त्यस्तो नदेखिने उनको भनाई छ । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले पत्रकारहरुलाई सोधे – ‘के म ‘चुसेको आँप’ जस्तो देखिन्छु र ?’ यस्तै उनले ‘चुसेको आँप’ जस्तो देखिन्छु कि भन्ने डरले अहिले सम्म आफुले आफुलाई गुगलमा सर्च नगरेको पनि बताए । तर आफुलाई आउने हरेक किसिमका प्रतिकृयालाई आत्मासाथ गर्ने उनले बताए ।सामाजिक सञ्जाल युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा उनलाई ‘चुसेको आँप’ भन्दै ट्रोल बनाईनुका साथ कमेन्ट गर्ने गरेको पाईन्छ ।